BurmeseBible: တီဘီ ဂျော့ခ်ျဝါ T.B Joshua & ဒေဗစ်ယုံကင်ချို David Yonggi Cho
တီဘီ ဂျော့ခ်ျဝါ T.B Joshua & ဒေဗစ်ယုံကင်ချို David Yonggi Cho
တီဘီ ဂျော့ခ်ျဝါ T.B Joshuaဓမ္မဆရာ - အာဖရိက (နိုင်ဂျီးရီးယား - လူဦးရေ သန်း၁၀၀၊ ခရစ်ယာန် ၈၀%)
June 12, 1963 မှာ ဆင်းရဲသူ မိသားစုမှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အင်္ဂလီကန် မူလတန်းမှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး၊ အလယ်တန်း Secondary မှာ စာမေးပွဲကျပြီး ကျောင်းမတတ်နိုင်ပါ။ Lagos မြိျု့မှာ လမ်းပေါ်မှာ လူခြေထောက်လိုက်ဆေးပေးသော အလုပ်ကို စတင်လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကြက်မွေးမြူရေးခြံမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ကျမ်းစာကျောင်းတက်သည်။ ၁၉နှစ်တွင် ဘုရားခေါ်သံရရှိပြီး၊ ဓမ္မဆရာဘ၀ ကူပြောင်းလာခဲ့သည်။ ကြိုတင်နမိတ်ဖတ်နိုင်ခြင်း နှင့် အနာရောဂါပျောက်စေခြင်းများစွာ အံ့သြစရာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးကို ကြိုတင်ပြောကြားခြင်းမှာ သူနမိတ်ဖတ်ခြင်းများစွာမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
အပယ်ခံဘ၀၊ အထီးကျန်ဘ၀မှာနေရပါတယ်။ 01.12.2008 By Collins Edomaruse, Abiodun Ajala and Olawale Olaley
မေးး။ အစပြုခြင်းမှာ အကောင်းဆုံးကတော့ မေးလိုက်တာပါပဲ။ ကဲ .. တီ.ဘီ. ဂျော့ခ်ျဝါ ဆိုတာဘယ်သူလဲ ။
ဖြေ။ ကောင်းပြီး။ ပရောဖက် တီ.ဘီ. ဂျော့ခ်ျဝါ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားမှုသိပ်မရှိပါဘူး။ သူက သာမန်လူတစ်ယောက်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ခြားနားချက်ကတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းပဲ။ ဒါတွေဟာ ဘုရား ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တာပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်နဲ့ ထုတ်လုပ်ခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးး။ ဒီတော့ .. ဆရာ ဘယ်လို အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်း စတင်ခဲ့ပါသလဲ။
ဖြေ။ အသင်းတော် စခဲ့တာလဲ တခြားအမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေလိုပါပဲ။ ခြားနားတဲ့အချက်ကို ပြောရရင် ဘုရားသခင်ရဲ့ လမ်းခရီး နဲ့ ပုံသက်သေ ပြတဲ့အတိုင်း၊ ကျွန်တော်တို့ဘ၀ကို ဘုရားသခင်ပဲလုပ်ဆောင်တာပါ။ ခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လား .. ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်မှုဆိုတာ လူတွေလုပ်ဆောင်မှုနဲ့ မတူဘူး၊ ဘုရားဟာ ရူးကြောင်ကြောင်အလုပ်တွေလဲ အသုံးပြုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာ ထူးဆန်းအံ့သြဘွယ်ကောင်းတေယ်။ ဒီလိုပဲ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
မေးး။ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုကြီးထွားလာတာ ဘယ်လိုလဲ ပြောပြပါ။
ဖြေ။ အနှစ်ချုပ်ကတော့၊ ကျွန်တော်ာ ဆင်းရဲတဲ့ဘ၀ကို ခံစားခဲ့သူပါ။ အရှက်ခွဲခံရခြင်း၊ ရှုံချခံရခြင်းများ စွာနဲ့ပါ။ ဒီလို ဘ၀အတွေ့အကြုံများဟာ ကျွန်တော့ကို ဂုဏ်ပြုခြင်းလို့ သက်သေခံပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလိုဘ၀မျိုးဟာ ယခုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေရောက်အောင် တွန်းအားပေးတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်များဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့ဘ၀မှာ အရှက်ကွဲခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းများဟာ ဂုဏ်သိက္ခာများလို့ ခံယူပါတယ်။ ဒီကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုမဆို ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
မေးး။ ဒါဆိုရင် ဒီလို ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ဘ၀နောက်ခံနဲ့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို စစ်မှန်စွာယုံကြည်လာတယ်။ ဘုရားသခင်နဲ့ တွေ့လာရတယ် ဆိုတဲ့ ကျေးဇူးတော်များ ရလာတယ် ထင်ပါသလား။
ဖြေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘုရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဆီ ချီတက်သွားရင် ဘုရားနဲ့အတူသွားရပါမယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဘုရားသခင်ဆီ နဲ့အတူချီတက်သွားရတယ်။ ဘုရားသခင်အတွက် ချီတက်သွားရတယ်။ အဲဒီအချိန်အာ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရတယ်။ ဒီတော့ ကျေးဇူးတော်နဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများလည်း ရရှိပါတယ်။
မေးး။ ဆရာကို ဘုရားခေါ်သံ ဘယ်အချိန်ကကြားရပါသလဲ၊ ဘယ်လို နိမိတ်အချက်များ ပြပါသလဲ။
ဖြေ။ ၂၃နှစ်လောက် ကြာသွားပါပြီး။ တကြိမ်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ပျက်ကုန်တာပါ။ ဘုရားနဲ့တွေ့သူအများစုကတော့ ဘုရာရဲ့လူတစ်ယောက်အားဖြင့် ဘုရားခေါ်သံကြာရတယ် ပြောပေမဲ့ ကျွန်တော့အတွက်တော့ တစ်မျိုးပါ။ ကျွန်တော့်လို ကြုံရသူများလည်း အများအပြားရှိမှာပါ။ ကျွန်တော့အတွေ့အကြုံကတော့ ရထားမှောက်ပျက်စီးစဉ် ခြုံပုတ်တခုမှာ ၃ရက်တိုင်တိုင် တင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့။ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ လက်တစ်ခုက ကျမ်းစာအုပ်ကို ညွှန်ပြနေတာမြင်ရတယ်။ အဲဒီကျမ်းစာအုပ်ဟာ ကျွန်တော့ရင်ဘတ်ထဲ ၀င်သွားပြီး၊ ကျွန်တော့နှလုံးသားနဲ့အတူ ရောမွှေနောက်အရည်ပျော်သွားတယ်လို့ ခံစားလိုက်ရတယ်။ အဲဒီမှာပဲ အသက်ကြီးသူ တမန်တော်၊ ပရောဖက်တွေကို မျက်နှာ ကြည့်မြင်လို့မရတဲ့ အရပ်ရှည်ရျည်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ကောင်းကင်ဘုံး၊ လေထဲမှာ တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ သခင်ယေရှုပဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ လေထဲရောက်နေတယ်။ အဲဒီအရပ်ရှည်သူရဲ့ လက်ကို မြင်ရတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်နှာကတော့ တောက်ပလွန်းလို့ မမြင်ရဘူး။ ကောင်းကင်ဘုံအထိ အရပ်ရှည်လှပြီး လေထဲမှာရှိနေတယ်။ တမန်တော်တွေရဲ့ မျက်နှာတွေကိုတော့ မြင်ရပါတယ်။ တမန်တော် ပေါလု၊ ပေတရု၊ မောဇက်၊ ဧလိယ နဲ့ အခြားသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကို ရင်ဘတ်တွေမှာ ထင်ထင်ရှားရှား ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီမှာ အသံတစ်ခု"ငါသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သင့်ကို ၀ိညာဉ်ကောင်းကြီးပေးမည်။ ကောင်းကင်ဘုံမှ သင့်အဘဘုရားသခင်အတွက် အမှုတော်ဆောင်လော့" ကြားရပါတယ်။ အဲဒီ အရပ်ရှည်သူကပဲ လက်ဝါးကပ်တိုင်အသေးလေးနဲ့ ကျမ်းစာအုပ်အကြီးတခုကို ပေးပါတယ်။ စောစောက ကျွန်တော့ နှလုံးသားထဲ ၀င်သွားတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်ထက်တဲ့ ကျမ်းစာအုပ်ပါ။ ကျွန်တော့နာမည် နဲ့ အချိန်ကာလကို ပုံနှိပ်ထားပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေးဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်တွေ ဖြစ်သွားမှာစိုးပုံရပါတယ်။ အရပ်ရှည်သူရဲ့ ဦးခေါင်းကို မမြင်နိုင်ပေမဲ့ အရင်အသံအတိုင်း .. "ငါသည် သင်၏ ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သင့်ကို ထူးဆန်းတဲ့နည်းလမ်းများ ပြမည်။ သင်၏ သွန်သင်မှု၊ ဓမ္မဒေသနာ၊ အံ့သြဘွယ်ဖြစ်ရပ်များ၊ နမိတ်လက္ခဏာများ နဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ရပ်များကို သင့်အားဖြင့် ငါ့ကိုသိမြင်စေမည်။ " လို့ ပြောကြားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးတော့ ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်အားကိုးခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော့ အမြင်အာရုံများစွာ တစ်နှစ်ပြီး၊ တစ်နှစ် ရရှိလာပါတယ်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြီးဆိုတာ ကျွန်တော့ရဲ့ တာဝန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ နှလုံးသားထဲ ၀င်ရောက်သွားတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်ကတော့ ၀ိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်း (သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်) ရဲ့ သင်္ကေတလို့ ဆိုရပါမယ်။
Healing Youtube Video: http://www.youtube.com/watch?v=pG8Qzmrj4Go&feature=related
ဒေဗစ်ယုံကင်ချို David Yonggi Cho
တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ (လူဦးရေ ၄၈သန်း၊ ခရစ်ယာန် ၂၅% - 12 millions)
၁၉၃၆ မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး ဆယ်တန်းအောင်ပြီးချိန်၊ ဖခင်ဖြစ်သူ စီးပွားပျက်သွားလို့ တက္ကသိုလ်မတက်နိုင်ပဲ၊ ဈေးချိုတဲ့စက်မှုကျောင်းလေးကို တက်ရတယ်။ အနီးနားက အမေရိကန်စစ်စခန်း စစ်သားများထံမှ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူခဲ့ရတယ်။ အသက်၁၉နှစ်အရွယ်မှ အဆုပ်ရောဂါကြောင့် သေအံ့ဆဲ၊ ဘုန်းဘုန်းလဲနေတဲ့ သူဆီကို မိန်မငယ်တစ်ဦးလာရောက်ပြီး ယေရှုအကြောင်းပြောပြ ကျမ်းစာအုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမိရိုးဖလာမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်အလုပ်လုပ်ရင်း Soul Full Gospel ကျမ်းစာကျောင်းမှာ စကောလားရှစ်နဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပြီး ၁၉၅၈ မှာ ဘွဲ့ရရှိတယ်။ နောက်ပိုင်း အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး နဲ့ သူ့သမီး၃ဦးတို့စုပြီး ဆုတောင်း၊ ၀တ်ပြုပွဲ စတင်လုပ်ဆောင်တယ်။ သမီးတစ်ဦးနဲ့ ဒေးဗစ်ယုံကင်ချို လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၆၁မှာ အသင်းသား ၄၀၀ကျော်တဲ့ အသင်းတော်ဖြစ်လာတယ်။
နောက်ပိုင်း အသင်းသား ထောင်နဲ့ချီဖြစ်လာချိန် တစ်ဦးတည်း ဦးဆောင်လုပ်ရာမှာ ကျမ်းမာရေးချို့ယွင်းလာတယ်။ နေရာ၂၀ခုခွဲပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၇၃ မှာ Yoido Church စတင်ခဲ့ပြီးနောက် အသင်းသား ၄သောင်းမှ ၇သောင်းဖြစ်လာတယ်။ ယခု ၂၀၁၁ မှာ အသင်းသား တစ်သိန်းရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းတော်အဖြစ် တည်ရှိနေပါတယ်။
ဆရာထန်ဇခတ် စာအုပ် "ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်ရန် ခြေလှမ်း (၄)ဆင့်" Page 127 မှာ ဒေးဗစ်ယုံကင်ချို အကြောင်းကို ရေးထားပါတယ်။ ... ကျွန်တော်သည် ဆရာတော် ဒေါက်တာ ယုံကီချိုး၏ လေဟာပြင်လူထု တရားဟောပြောပွဲကြီတစ်ခု၌ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ သူဟ တရားဟောချက်များသည် သာမန်အဆင့် ရိုးရိုးလေးမှသာ ဖြစ်သဖြင့် အားမလို၊ အားမရ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ် ဆရာတော် ယုံကင်ချို သည် လူနာများ၊ နာတာရှည်ရောဂါသည်များ၊ မျက်စိကန်းသူများ၊ ကိုယ်တစ်ခြမ်းသေသူများမှ အစ ရောဂါသည်များကို ဆုတောင်းပေးရန် ခေါ်ဖိတ်လိုက်ပါသည်။ ထိုအခါ ခရစ်ယာန်များသာမက ခရစ်ယာန်မဟုတ်သူ မြောက်များစွာသည် ဆုတောင်းခံခဲ့ကြသည်။ အချို့မှာ ထမ်းစင်ဖြင့် ထမ်းလာကြသည်။ မျက်မမြင်များသည် ဆွဲခေါ်လာခဲ့ကြသည်။ ရောဂါသည်မျိုးစုံ ချဉ်းကပ်လာရာ ဒေါက်တာ ယုံကင်ချို၏ ဆုတောင်းချက်အပြီးတွင် မြောက်များစွာသော လူနာတို့သည် ထမ်းစဉ်မလိုတော့ပဲ မိမိကိုယ်တိုင် လမ်းလျှောက်၍ ပြန်သွားနိုင်ကြသည်။ ကိုယ်တစ်ခြမ်းသေသောသူများ ကျမ်းမာခြင်း ရလာကြသည်။ မျက်စိကန်းသူများ မျက်စိမြင်လာကြသည်။ နားပင်းသူများ ပကတိုအတိုင်း ကြားလာရသည်။
ဤသို့ဖြင့် ၀ိညာဉ်တော် ဆုကျေးဇူးဖြစ်သော အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းတည်း ဟူသော နိမိတ်လက္ခဏာမှာ ပြင်းထန်လွန်းလှပါသဖြင့် မယုံကြည်သောသူများသည် ယေရှုကို ယုံကြည်လာကြ၍ ခရစ်ယာန်မဟုတ်သောသူ မြောက်မြားစွာတို့သည် ညစဉ်ညတိုင်း လူတစ်သောင်းခန့် ခရစ်ယာန်ဘ၀သို့ ကူးပြောင်းလာကြကြောင်း၊ ကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော့ရင်၌ မည်သို့ခံစားရပါသနည်း ဆိုသော် သြော် ... ဆရာတော် ယုံကင်ချို၏ အသင်းတော်သည် အသင်းသူအသင်းသား ၇သိန်းခွဲ (ထိုစဉ်က) ရှိခြင်းမှာ နည်းပင်နည်းလှ ပါသေးသကား။ ဤသို့သာ ဘုရားသခင်၏ အသုံးတော်ခံ၍ နမိတ်လက္ခဏာများ ဆက်၍ဆက်၍ ဖြစ်မည်ဆိုပါက၊ ကမ္ဘာတစ်ခွင်လုံးကိုပင် ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ သိမ်းပိုက်နိုင်စွမ်း ဘုရားသခင်က ပေးအပ်ပါတကား .. ဟု ခံစားမိပါသည်။ ယခုတွင် ဆရာတော် ယုံကင်ချို၏ အသင်းသူအသင်းသားများမှာ (တစ်သန်း - ၂၀၁၁) ရှိကြောင်း ကမ္ဘာက အသိပင်ဖြစ်သည်။
Healing Youtube4min Video: http://www.youtube.com/watch?v=nGDVcqALatg
စင်ကာပူ၊ ကိုးရီးယား၊ အမေရိကား၊ ဥရောပ တွေမှာ လူသောင်းနဲ့ချီတက်ရောက်ကြတာ Spiritual, Healing & Prosperity တွေကို ရရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒီ၃ချက်ဟာ အသင်းတော်တိုင်းမှာ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ဆုတောင်း၊ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းနဲ့လဲ ရရှိနိုင်သော်လည်း လူများစွာနဲ့ Mega Church အသင်းတော်မျိုးမှာတော့ ဆရာ့အားကိုးနဲ့ ပိုအားရကြလို့ ဖြစ်မှာပါ။
ဒီဆရာနှစ်ပါးရဲ့ အသင်းတော် Mega Church ကိုကြည့်ရင် အသင်းသားအများစုဟာ ၀ိညာဉ်ရေးလိုချင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆရာနှစ်ပါးဟာ အနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်း Healing မှာ အလွန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါတယ်။ မြောက်များစွာသောသူများ အနာရောဂါပျောက်ကင်းမှုကို ရရှိတဲ့အတွက် မယုံကြည်သူများစွာ လာရောက်ကြတယ်။ ပြောင်းလဲကြပါတယ်။ သေသူပြန်ရှင်ခြင်း၊ ဖျားနာ၊ ကိုယ်လက်သေသူများကို နိုင်ဂျီးရီးယား ဆရာ အီပီ ဂျောခ်ျဝါ ရဲ့ ဆုတောင်းခြင်းများကြောင့် ပျောက်ကင်းသွားခြင်းများ အင်တာနက် YouTube မှာ အများကြီးမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
သို့သော် ဒီဆရာ၂ပါးက တရားဟောတဲ့အချိန်မှာ အနာရောဂါထက် ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသာ ပဓါနထား ဝေငှပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသာ မိမိနဲ့အတူ အမြဲရှိနေသူအတွက် အနာရောဂါ၊ နာကျင်မှုဝေဒနာများ ပျောက်ကင်းပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော် မရှိသေးသော်လည်း ကျေးဇူးတော်ကြောင့် Healin အနာရောဂါပျောက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် Followup နှုတ်ကပတ်တော် နှလုံးသားထဲ တကယ်ဝင်မသွားရင်တော့ ခဏကြာရင် ဝေဒနာတွေ ပြန်ပေါ်လာမှာပါ။ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ အမြဲရှိနေမှ ဝေဒနာပျောက်နိုင်မယ်။ ခံနိုင်ပါတယ်။ မခြားမလပ်ဆုတောင်းခြင်း၊ ရွင်လန်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်း နဲ့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်ကြပါတယ်။